Puntland oo war ka soo saartay xaalada Muqdisho - Jowhar somali news leader
Home NEWS Puntland oo war ka soo saartay xaalada Muqdisho
Puntland oo war ka soo saartay xaalada Muqdisho
Maamulka Puntland ayaa war dabacsan ka soo saartay xaalada Muqdisho oo saacadihii la soo dhaafay ka dhaceen shaqaaqooyin sababay dhimasho iyo dhaawac, kaddib markii Ciidamada dowladda ay weerareen Midowga Musharaxiinta oo magaalada ka qaban qaabinayay bannaan bax.
Qoraal ka soo baxay Madaxtooyada Puntland ayaa lagu sheegay inay si dhow isha igu heysay xaalada Muqdisho, waxaana wax kaga xumaado ku tilmaamyau iyadoo la sugayo doorasho inay dhacdo in falal abuuri kara qalalaaso iyo xasilooni daro ay dhacaan.
Halkan hoose ka akhriso War saxaafadeedk:-
Dowladda Puntland waxa ay isha ku haysay waxa ka dhacayay xalay saqdii dhexe iyo Saaka aroortii Magaaladda Muqdisho, waxaa wax laga xumaado ah in iyadoo la sugaayo doorasho ka dhacda Dalka ay timaado falal abuuri kara qalalaaso iyo xasilooni daro ka aloosanta dalka oo weliba ay qayb ka noqdaan ciidamada qalabka sida ee loo diyaariyey in ay dhowraan karaamada iyo sharafta muwaadinka Soomaaliyeed.
Waxaan ugu baaqaynaa dhammaan masuuliyiinta dalka in uu caqligu taliyo oo aan dhiig loo daadin kala aragti duwanaan siyaasadeed iyadoo lagu xaliyi karo sifooyin kale oo ka haboon. Lana iIlaaliyo dimuqraadiyadda curdunka ah ee aynu haysano, fursadna aan loo siin ururada argagixisada in ay helaan siyaabo ay ugu soo noqdaan magaaladda Muqdisho oo ay dhibaatooyin uga geystaan.
Previous articleMidowga Afrika oo ku amray AMISOM in dhex dhexaad ka noqdaan waxa ka socda Muqdisho
Next articleCovid-19: The Swedish exception? – Reporters